MelodyMon: May 2008
ဒီအပါတ်ကတော့မြန်မာသီချင်းလေးနှစ်ပုဒ်ရယ်၊ ဂျပန်ရိုးရာဝတ္ထုတိုရယ် ကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကတော့ (အချစ်အတွက်ကံမကောင်းခဲ့သူ - အယ်လ်ဆိုင်းဇီ) နဲ့ (သနပ်ခါး - Black Hole ) ပါ။ ၀တ္ထုတိုထဲမှာ သံစဉ်လည်းဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်။ အသံမှတ်မိလား။ ဟဲဟဲ . . .
Click Here -----> May 31
Posted by MelodyMon at 11:36 PM No comments:
Labels: NHK Radio Program
အရမ်းနည်းနေသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမလုပ်တာ
Posted by MelodyMon at 2:50 AM No comments:
ဘာတွေမှန်းလည်းမသိဘူး။ Programming ကိုဘယ်လို
ဘလော်ဂါကိုကိုမမတွေထဲမှာ ပရိုဂရမ်မာတွေ၊ နည်းပညာ
Posted by MelodyMon at 9:58 PM No comments:
ဒီအပါတ်က လေးဖြူရဲ. (မင်းကိုချစ်လို့) ရယ်၊ ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ.(အချစ်ကအမှား)
ရယ်လွှင့်သွားတာ။ ဒါပေမယ့် အဆိုတော်တွေရဲ.သီချင်းတွေကိုအပါတ်တိုင်းတော့
လိုက်ရတယ်။ အဟင့် (ToT)
ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာသံစဉ်တို့တွေဆိုထားတဲ့ ( ဆုတောင်း )ဆိုတဲ့သီချင်း
တော့တင်ထားတယ်။ နားထောင်ကြည့်ပါဦး။(^_^) -----> May 24
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းသံစဉ်နေသိပ်မကောင်းတာရော၊ အလုပ်များနေတာကြောင့်လည်လည်မထွက်ဖြစ်ဘူး။ ဆောရီးနော်။လာလည်သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သံစဉ်အလည်မလာဖြစ်တာနဲ့သံစဉ့်ဆီလည်း
မလာတော့ဘဲတော့မနေနဲ့နော်။ နောင်လည်းလာလည်ဦးနော်။ (^_^)
Posted by MelodyMon at 9:19 PM4comments:
Posted by MelodyMon at 2:12 AM No comments:
အောင်မလေး !!! ဘုရား ဘုရား !!!
onlineပေါ်မှာဘလောဂါတွေရန်ဖြစ်နေကြတာကြောက်စရာလန့်စရာကြီးပါလား။ တချို့တွေကလည်းသူများတွေရဲ.နာမည်ကိုလိုက်ဖျက်၊ သိက္ခာချရေးသားနေလိုက်
ကြတာ စိတ်ညစ်စရာဘဲ။ ဘလော့ဂ်ရေးရတာတောင်ကြောက်သလိုလိုဖြစ်လာပြီ။
OOPS!!!!!!! ၃နာရီကျော်သွားပြီ။ အိပ်မှ အိပ်မှ ။
Posted by MelodyMon at 3:13 AM 1 comment:
Posted by MelodyMon at 12:38 AM No comments:
Labels: Meow Meow Meow ♪
Oops! ၂ နာရီခွဲပြီ။ အိပ်မှဖြစ်တော့မယ်။ အားလုံးဘဲ အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ။
Click >>> May 17
Posted by MelodyMon at 2:11 AM No comments:
Posted by MelodyMon at 12:39 AM No comments:
Posted by MelodyMon at 12:17 AM No comments:
Posted by MelodyMon at 1:32 AM No comments:
Posted by MelodyMon at 12:03 AM No comments:
Posted by MelodyMon at 11:40 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 11:33 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 11:07 PM No comments:
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အလုပ်တွေရှုပ်သလို စိတ်တွေလည်းတအားရှုပ်နေတယ်။ ကြားရတဲ့သတင်းတွေကလည်းစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေချည်းပဲ။ အဲဒါနဲ့ဘဲပို့စ်တောင်မှအသစ်မတင်ဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့မှဘဲရေးဖြစ်တော့တယ်။ ရေးသာရေးနေတာ။ ဘာရေးရမှန်းလည်းမသိဘူး။ စိတ်ရှုပ်နေတာဘဲသိတယ်။တော်ပြီ။ ဆက်မရေးတော့ဘူး။
Posted by MelodyMon at 4:44 PM 1 comment:
Posted by MelodyMon at 1:36 AM 1 comment:
Posted by MelodyMon at 1:19 AM2comments:
sate shote tae.................................................
Posted by MelodyMon at 1:14 AM No comments:
Songs For Mother's Day!
★　Zodiac - Kwint Hloot Par AMay
★　Htoo Eain Thin - AMay. Eain
Posted by MelodyMon at 12:59 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 1:03 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 12:58 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 12:44 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 12:25 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 12:14 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 12:12 PM No comments:
သံဃာတော်များနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားအပေါင်း ဘေးရန်ကင်းပါစေ။
Posted by MelodyMon at 10:43 PM No comments:
EOT လုပ်တာ နောက်ဆုံးအဆင့်ကျမှမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ template မှာကပ်တဲ့အခါ Invalid variable declaration in page skin: Variable is used but not defined. Input: WEFT လို့ပေါ်နေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သိရင်ပြောပြပါဦး။ ဆံပင်တွေဖြူတော့မယ်။
Posted by MelodyMon at 10:20 PM No comments:
နော်။ (^^；) အဖြေမှန်ရင်ရေဒီယိုဂျပန်ကလက်ဆောင်လေးတွေပို့
ဒီအပါတ်ရဲ.မြန်မာသီချင်းက ရသ ရဲ. သစ်ပင်။
ဂျပန်စာသင်ထားတဲ့သီချင်းလေးက 大橋卓弥 ရဲ. ありがとう
(ကျေးဇူးတင်ပါတယ်) ဆိုတဲ့သီချင်းပေါ့။ Youtube ကနေနားထောင်
စာမေးပွဲမပြီးခင်တင်လိုက်ရင်အဖြေသိသွားမှာစိုးလို့။ ဟဲဟဲ ။
Posted by MelodyMon at 6:57 PM No comments:
僕はサンタクロース I am Santa Clause by Funky Monkey Babys
Posted by MelodyMon at 6:38 PM No comments:
I will try to EOT? when i have time.
I am soooo bzzz with my new little shopping site Melody these2days.
I started building that site yesterday and I spent about4hours today too.
But there are onlyafew things on my site and I still need to increase more.
And I wanna change the design too. But I don't really have time. (TOT)
I have to sleep now. It's 1:30am already. Sooo Tired!!
Bye everyone! Haveasweet dream.
Posted by MelodyMon at 1:27 AM No comments: